eSancharpati | इराकमा ६ महिनापछिको भयानक बम बिस्फोट : कम्तीमा २५ को मृत्यु, आइएसले लियो जिम्मेवारी - eSancharpati इराकमा ६ महिनापछिको भयानक बम बिस्फोट : कम्तीमा २५ को मृत्यु, आइएसले लियो जिम्मेवारी - eSancharpati
इराकमा ६ महिनापछिको भयानक बम बिस्फोट : कम्तीमा २५ को मृत्यु, आइएसले लियो जिम्मेवारी
५ श्रावण २०७८, मंगलवार १२:०६
इराकको राजधानी बगदादको एक बजारमा सोमबार भएको एक बम बिस्फोटमा कम्तीमा २५ जना मारिएका छन् भने दर्जनौं घाइते भएका छन् । यो बिस्फोटमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरु धेरैजसो बजारमा इदको किनमेल गर्न गएका थिए । यो बगदादमा पछिल्लो ६ महिनामा भएको सबैभन्दा भयानक बम बिस्फोट हो ।
व्यस्त अल–वुहालियत बजारमा यो बिस्फोट एक डिभाइसमार्फत् गरियो । हमलाको जिम्मेवारी इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह (आइएस) ले लिएको छ । आइएसले आफ्नै एक सदस्यले बिस्फोट गराउने डिभाइस उडाएको बताएको छ । इराकको सरकारले सन् २०१७ को अन्त्यमा सुन्नी मुसलमान जिहादी समूह आइएसविरुद्ध आफ्नो जीतको घोषणा गरेको थियो ।
यद्यपि, त्यसपछि पनि इराकमा आइएसको स्लीपर सेल लगातार सक्रिय छ । ज्यान गुमाउनेमा महिला तथा बालबालिकाः यसअघि अप्रिलमा एक बजारमा कारभित्र बम बिस्फोट गराइएको थियो जसमा चारजना मारिएका थिए । आइएसले यो हमलाको जिम्मेवारी लिएको थियो । बगदादको जुन इलाकामा यो बिस्फोट भएको छ, त्यहाँ धेरैजसो शिया मुसलमान बस्छन् ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सको स्रोतले बताए अनुसार बिस्फोटमा मारिनेमा महिला र बालबालिका पनि समावेश थिए । बिस्फोटपछि केही पसलमा आगलागी पनि गरिएको थियो । इराकी सेनाका एक प्रवक्ताले दिएको जानकारी अनुसार मुस्तफा अल–कदीमीले बजारको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार प्रहरी इन्चार्जको गिरफ्तारीको आदेश दिएका छन् र घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ ।
तनहुँमा एमाले उपाध्यक्ष सहित ३५० जना माओवादीमा प्रवेश
मन्त्रिपरिषद् बैठक : दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
माधव नेपालको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो मन्त्रीको नाम, को-को परे?
एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन, अमेरिकाले मान्दैन- परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्का
३ आश्विन २०७८, आईतवार २१:५९
केपी ओलीको क्षेत्रमा एमाले छोडेर सिङ्गो गाउँ नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार २०:५१
पाल्पामा काँग्रेस र एमाले परित्याग गरि युवाहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
७ आश्विन २०७८, बिहीबार ०७:३४
गुल्मी धुर्कोटका एमाले नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश
९ आश्विन २०७८, शनिबार २०:३९
झापा शिवसताक्षीमा लिम्बुवान, एमाले, काग्रेसका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
६ आश्विन २०७८, बुधबार २०:५०